कम्ब्याट त्यागेर फिल्म- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
कम्ब्याट त्यागेर फिल्म
बेलायती सेनामा ‘बेस्ट सोल्जर’ अवार्ड जितेकै वर्ष जागिर छाडेर स्वदेश फर्किएका मिलन चाम्स यतिबेला नेपाली फिल्म निर्देशनमा व्यस्त छन् ।
भाद्र २२, २०७५ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — मिलन चाम्लिङ उर्फ चाम्सले १२–१३ वर्षको छँदै भोजपुरमा शिवशक्ति फिल्म हल चलाउन थालिसकेका थिए । उनी राई परिवारमा जन्मिएकैले रहर मारेरै भए पनि ब्रिटिस आर्मी (बेलायती सेना) बन्न पुगेका थिए । ‘मेरा बाउबाजे सबै ब्रिटिस आर्मीमा भएकाले मलाई पनि आर्मी नै बन्नुपर्छ भनेर दबाब दिन्थे । मलाई त्यता रुचि नै थिएन ।
बच्चैदेखि भाग्दै, लुक्दै नेपाली, हिन्दी फिल्म यति धेरै हेरें कि मलाई पनि फिल्म निर्माण गर्ने रहर भयो,’ उनले भने ।
फेब्रुअरी १९९८ मा लन्डनबाट चाम्सको फौजी जीवन सुरु भयो । धन्न, आर्मीतर्फ पनि प्रशासनिक विभागमा भएकाले मिलनलाई कम्ब्याटमा बन्दुक भिरेर भने हिँड्नुपरेन । तैपनि घर र फिल्मको यादले खुब सताउँथ्यो । ‘साथीहरू मलाई ५ प्रतिशत मात्रै आर्मी र बाँकी सबै मनोरञ्जनले भरिएको छ भनेर जिस्काउँथे,’ त्यस बेला भर्खर १७ वर्ष पार गरेका मिलनले रोएरै पश्चाताप गर्नुमा भन्दा आर्मी जीवनलाई अवसरमा बदल्ने सोचेको बताए, ‘त्यसपछि फिल्म इडिटिङदेखि मेकिङसम्म पढ्न थालें ।’
उनले आफ्नै बलबुताले फाटफुट म्युजिक भिडियो निर्देशन पनि गर्न थाले । भिडियोमा राम्रै जमिरहेका बेला सन् २००५ मा उनले पहिलोपटक सर्ट फिल्म ‘पश्चाताप’ बनाए । यसबाट उनले पश्चाताप गर्नुपरेन । बरु १५ वर्षपछि आर्मी छोडेर पूर्णकालीन फिल्म निर्देशक बन्न त्यसले भर्‍याङको काम गर्‍यो । उनले बेस्ट सोल्जरको मेडल जितेकै वर्ष मन चंगा पारेर ब्रिटिस आर्मी छोडेका थिए ।
सन् २०१२ मा नेपाल फर्केर मिलनले पहिलो फिल्म बनाए, ‘हँसिया’ । आफू मात्रै नयाँ थिएनन्, छायांकार, सम्पादक, द्वन्द्व निर्देशकदेखि अधिकांश नयाँ लिएर एक्सन फिल्म बनाए । फिल्म खासै चलेन तर त्यसपछि मिलन भने खुबै चले । कारण, पहिलो फिल्ममै उनले आफूमा प्रचुर सम्भावना रहेको देखाइदिए ।
‘तर त्यो बेला ममा भयंकर घमण्ड थियो । म जत्तिको जान्ने कोही पनि छैनझैं गर्थें । द्वन्द्व निर्देशकलाई पनि सिकाइदिन्थें । अहिले सम्झिँदा लाज लाग्छ,’ मार्शल आर्ट्स पनि खेलेका मिलनले आफू घमण्डी भएर नै त्यो फिल्म कमजोर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै भने, ‘मैले एक्सनका नाममा इमोसनलाई छोडेको रहेछु ।’
त्यसपछि आफ्नो सहज र रुचिको जानरा एक्सनबाट हटेर बनाएको लभस्टोरी फिल्म ‘वीरविक्रम’ हिट भएपछि भने मिलनको फिल्मप्रतिको बुझाइ फेरियो । भन्छन्, ‘आम मानिसको जीवनको भोगाइभित्र छिर्न सक्नुपर्ने रहेछ । जब दर्शकले फिल्मलाई आफूसँग रिलेट गर्छ तब मन पराइने रहेछ ।’ त्यसपछि ‘लिलिबिली’ हुँदै पछिल्लो फिल्म ‘बोबी’ बाट मिलनले सफलता हात पारे । त्यसो त बीचका उनका दुई फिल्म ‘ब्लाइन्ड रक्स’ र ‘ह्याप्पी डेज’ आशातीत सफल भएनन् । तैपनि मिलनको निर्देशकीय क्रेज घटेन । यतिबेला उनले अनमोल केसीलाई लिएर ‘ब्याचलर बन्टी’ र त्यस लगत्तै ‘वीरविक्रम २’ बनाउँदै छन् ।
पाँच वर्षभित्र ६ फिल्म रिलिज गरिसकेका मिलन यतिबेला छिटो फिल्म तयार पार्नेमा दरिएका छन् । उनी यसो हुनुमा आफूमा भएको सम्पादन र छायांकनको ज्ञान रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘म सम्पादकको दृष्टिकोणले फिल्म खिच्ने भएकाले अनावश्यक सट हुँदैनन् । जसले गर्दा सुटिङ पनि छिटो सकिन्छ,’ मिलन यतिबेला दुई नेपाली प्रोजेक्टसँगै एक विदेशी प्रोजेक्टको तयारीमा पनि छन् । उनी झन्डै पाँच वर्षदेखि नै गृहकार्य भइरहेको फिल्म ‘गोर्खा प्रोटेक्टर’ लाई सन् २०२० को अन्त्यसम्म रिलिज गर्ने गरी फ्लोरमा जाने तयारी कस्दैछन् ।
एकाध नेपाली कलाकारबाहेक सबै विदेशी कलाकार रहने गोर्खा प्रोटेक्टरमा गोर्खाली, गौतम बुद्ध र सगरमाथालाई समावेश गरिने उनले बताए । ‘यो फिल्म रिलिजपछि नेपालमा पर्यटक बढ्नेछन् । गोर्खालीको इमानदारिता र बहादुरितालाई मुख्य गरी जोडिन्छ । क्वीन एलिजावेथदेखि सगरमाथा शिखरसम्म यसको कथा जोडिएको छ,’ विदेशी लेखकसँग मिलेर स्क्रिप्ट तयारी गरिरहेका मिलनले झन्डै २२ करोड रुपैयाँको बजेटमा फिल्म तयार पारिने जनाए ।
मिलन त्यस्तो उत्कृष्ट फिल्म बनाउँदैनन् तर भाग्यमानी छन् । उनका फिल्म चल्छन् पनि । प्राय: टिममा नयाँ व्यक्ति लिएर काम गर्न रुचाउने मिलनलाई अचेल स्टारको आडमा चलेको आरोप पनि लाग्छ । ‘हँसिया’ मा उनले राजेश हमालको कपाल कटाएको विषयलाई क्यास गराएका थिए भने ‘लिलिबिली’ सम्म आइपुग्दा उनको फिल्म चलाउने हतियार प्रदीप खड्का बनेका थिए । तर उनी यसमा सहमत छैनन् ।
‘कलाकारकै कारणले मात्रै फिल्म हिट हुँदैन । हो, स्टारडमका हिसाबले सुरुआती व्यापार गर्छ तर त्यसपछि चल्न फिल्म नै राम्रो हुनुपर्छ,’ उनले पनि आफ्नाबारे हुने गरेका टीकाटिप्पणी सुन्ने गरेका छन् । थप्छन्, ‘मेरोबारेमा त्यति राम्रो प्रतिक्रिया पाइँदैन । ‘बोबी’ कै विषयमा पनि मैले ३० लाख रुपैयाँको टिकट काटेको भन्ने हल्ला रहेछ । त्यसो भए के त्यो आँसु पनि मैले नै किनेको रहेछु ?’
मिलनलाई राम्रोसँग थाहा छ, फिल्मले व्यापार गर्नुपर्छ । निर्माताको लगानी सुरक्षित भएमात्र उद्योगका अरू पनि सुरक्षित हुन्छन् भन्ने उनको मान्यता छ । फेरि बच्चैदेखि फिल्मको व्यापार थालेका उनले त्यसलाई लन्डनमा रहँदा पनि निरन्तरता दिए । ‘सम्भवत: बेलायतमा नेपाली फिल्म चलाउने म नै पहिलो होला,’ मिलनले ठोकुवा नै गर्न नसके पनि नेपाली फिल्म चलाउन घरघरमा पुगेर टिकट बेचेको संघर्ष ताजै छ । उनै मिलन अचेल आफ्ना फिल्मको विदेशमा रेड कार्पेट प्रिमियरमा कुदिरहेका हुन्छन् । सिंगापुर, लन्डन वा नर्वेमा त्यसको सुरुवात पनि गरिसके ।
केही न केही नयाँ गर्न रुचाउने स्वभावका मिलन ‘ब्याचलर बन्टी’ लाई चार देशमा छायांकन गर्ने सुरसारमा छन् भने ‘वीरविक्रम २’ मा भारतकै कोरियोग्राफर, टेक्निसियन राखेर २०० क्राउडमा भारतमै गीत खिच्दैछन् । ‘बलिउडले काम कसरी गर्दोरहेछ भनेर मलाई सिक्नु छ । आखिर टेक्नोलोजीमा त लगभग सबै बराबरी नै भइसक्यो । हाम्रो कमजोरी कहाँ छ भन्ने फरक हेर्न पनि यो प्रयोग गर्न लागेको हुँ,’ उनले भने ।
बेनिशा हमाल नायिका
उहाँ (मिलन चाम्लिङ) एकदमै मिहिनेती र वचनको पक्का गर्ने स्वभावको मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँसँग मेसिन जसरी काम गर्न सक्ने खुबी छ । एकै वर्ष ३–४ वटा फिल्म गरिदिनु हुन्छ जुन कुरा हामीले सोच्न पनि सक्दैनौं । त्यति धेरै जाँगर कहाँबाट आउँछ होला ?
उहाँले काम गरेको देख्दा हामीलाई नै जाँगर चल्छ । फेरि कहिल्यै कामको दबाब महसुस गर्नुहुन्न । अरू त अरू बेला, बिरामी हुँदासमेत जोस घटेको देखिन्न । निर्देशकका रूपमा उहाँ कलाकारलाई स्वतन्त्रता दिने भएकाले इनपुट दिन पाइन्छ । कलाकारका कुरा सुन्ने र एकदमै आदर गर्ने स्वभावको डाउन टु अर्थ लाग्छ । यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले ३–४ फिल्मको सट्टा एउटै फिल्मलाई समय दिएर बनाएमा एउटै चीज झनै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।
फिल्म : हँसिया
व्यापार : सफल
फिल्म : वीरविक्रम
व्यापार : ब्लकबस्टर्स हिट
फिल्म : ब्लाइन्ड रक्स
व्यापार : असफल
फिल्म : ह्याप्पी डेज
फिल्म : लिलिबिली
फिल्म : बोबी
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १०:३४
काठमाडौँ — बंगलादेशमा भइरहेको साफ च्याम्पियनसिप २०१८ मा दक्षिण एसियाली सात देशले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसमा सहभागी सात देशका प्रशिक्षक कस्ता छन् त ? हिमेश वज्राचार्य लेख्छन् :
बालगोपाल महर्जन नेपाल
साफ च्याम्पियनसिप २०१८ मा सहभागी जति पनि टिम छन्, त्यसमध्ये नेपाल छाडेर सबैका प्रशिक्षक विदेशी छन् । खालि नेपालकै मात्र स्वदेशी । यी भाग्यमानी प्रशिक्षक हुन्, बालगोपाल महर्जन । उनको नाममा रहेको छ, नेपालले हात पारेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता सोलिडारिटीकप । जापानी प्रशिक्षक ग्योतुकी कोजुले टिम सम्हाल्ने स्थिति नरहेपनि बालगोपालले अवसर पाएका हुन् । राष्ट्रिय टिमका पूर्वखेलाडी तथा कप्तान यी प्रशिक्षक लामो समयदेखि कुनै न कुनै रूपमा नेपाली फुटबलसँग आबद्ध छन् । उनका लागि यसपल्टको साफ च्याम्पिनयसिप व्यक्तिगत रूपमा ठूलो उपलब्धि हो, मुख्य प्रशिक्षक हुन पाउनु ।
जेमी डे बंगलादेश
सबैभन्दा हाई प्रोफाइल प्रशिक्षकमा पर्छन्, बंगलादेशका जेमी डे । कुनै समय उनलाई इंग्लिस फुटबलकै भविष्य मानिएको थियो र उनले यू–१८ स्तरसम्म इंग्ल्यान्डको प्रतिनिधित्व पनि गरे । उनले आर्सनलसँग पनि अनुबन्ध गरे । पछि उनले आफ्नो खेल जीवनलाई त्यसरी अगाडि बढाउन सकेनन्, जसरी उनको अपेक्षा थियो । पछि प्रशिक्षक भए र अहिले बंगलादेशी टिमका प्रमुख छन् । इंग्ल्यान्डका केही तल्लो डिभिजनका क्लब हेरेर उनी बंगलादेश आएका हुन्, मे महिनायता । साफ च्याम्पियनसिपमा बंगलादेशका लागि राम्रो गर्नु नै उनको एक मात्र उद्देश्य रहनेछ, यसमा दुई मत छैन ।
जोस एन्टोनियो पाकिस्तान
निकै अनुभवी छन्, पाकिस्तानका प्रशिक्षक जोस एन्टोनियो । यसअघि उनले साउदी क्लब अल–अहिल सम्हालेका थिए । यसअघि इक्वेडर र ब्राजिलका क्लब पनि सम्हालिसकेका छन् । पछिल्लो अप्रिलमा मात्र उनलाई पाकिस्तानी टिमको जिम्मा दिइएको थियो र यो आफैंमा निकै महत्त्वाकांक्षी थियो । पाकिस्तान साढे दुई वर्षपछि औचापरिक रूपमा विश्व फुटबलमा फर्केको थियो र यसैका लागि टिम तयारीको जिम्मा पाएका हुन्, एन्टोनियोले । उनको एउटा चर्चित भनाइ बाहिर आएको छ, ‘मेरो पहिलो उद्देश्य भन्नु नै खेलाडीलाई फुटबल खेल्न सक्छु भन्ने विश्वास जगाउनु हो ।’
ट्रेभर मोर्गन, भुटान
अर्का अनुभवी प्रशिक्षकमा पर्छन्, भुटानका ट्रेभर मोर्गन । उनले धेरै फरक–फरक क्लब सम्हालेका छन्, जस्तो इंग्लिसदेखि अस्ट्ेर्रलिया, भारत, सिंगापुर, मलेसिया र हङकङसम्म । अहिले भने उनको जिम्मेवारीमा छ, भुटानको । उनै भाषामा भुटानी टिम सम्हाल्ने निर्णय धेरै अर्थमा रोमाञ्चित छ । खेलाडी छँदा औसत मोर्गनले सुरुमा भारतको इस्ट बगाल पनि सम्हालेका थिए । दुई फरक अवसरमा पश्चिम बंगालको यस चर्चित क्लब हेरेका छन्, उनले । निकै छिटो छिटो बोल्न रूचाउन मोर्गनको दाबी छ, भुटानी फुटबलले विस्तारै राम्रै प्रगति गरिरहेको छ र चाँडै यो राम्रै शक्ति बन्ने छ, दक्षिण एसियामा ।
स्टेफेन कन्सटाइनटिन, भारत
कुनै समय नेपालकै प्रशिक्षक थिए, यी आर्सनल समर्थक स्टेफेन कन्सटाइनटिन । उनले पनि धेरै देशका टिम सम्हालिसकेका छन् । भारतमा भने उनी लामो समयदेखि प्रशिक्षक छन्, सन् २०१५ देखि । उनी नेपालको प्रशिक्षक हुनु पाउनुलाई आफ्नो खेल जीवनकै सबैभन्दा निर्णायक मोड मान्छन् । अहिले भने उनी भारतका हाई प्रोफाइनल प्रशिक्षक हुन् । उनको नेतृत्वमा भारतले राम्रै प्रगति पनि गरेको छ, विश्व फुटबल । विशेषत: फिफा वरीयतामा भारतको प्रगति उल्लेखनीय छ । भारतले अब उनकै नेतृत्वमा सन् २०१९ को एसियाकप खेल्नेछ, जुन भारतीय फुटबलका लागि ठूलो परीक्षा सावित हुनेछ ।
निजाम पेकर अली, श्रीलंका
कुनै समय श्रीलंकाली फुटबलमा राम्रै चहलपहल हुन्थ्यो र टिमको प्रदर्शन पनि ठीकै हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय श्रीलंकाली फुटबल ओरालो लागेको छ । यसबाट मुक्ति दिलाउने प्रयासमा छन्, निजाम पेकर । सन् २०१८ को सुरुमा उनले श्रीलंकाली टिम हेर्न थालेका हुन् र यसक्रम उनको पहिलो ठूलो प्रतियोगिता रहेको छ, यही साफ च्याम्पिनसिप २०१८ । श्रीलंका आउन अगाडि उनी बंगलादेशमै थिए र उनले केही ठूला क्लब सम्हाले । यसपल्ट भने उनको चुनौती धेरै छन्, श्रीलंकाली फुटबललाई कसरी माथि उठाउने भनेर । बंगलादेशमा श्रीलंकाको प्रदर्शनले उनको भविष्य धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ ।
पेटर सेगरट, माल्दिभ्स
दक्षिण एसियाली फुटबललाई नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएका प्रशिक्षकमा पर्छन्, क्रोएसियामा जन्मेर जर्मन बनेका पेट सेगरटको । पछिल्लो समय माल्दिभ्स फुटबलले राम्रै प्रगति गरेको छ, तर यसमा उत्तिकै अवरोध पनि आउने गरेका छन् । आजभोलि माल्दिभ्सको फुटबलमा आन्तरिक कलह व्यापक छ । यसैबीच उनले टिम सम्हालेका छन्, मार्चयता । जर्जिया र अफगानिस्तानको राष्ट्रिय टिम हेरिसकेका सेगरटका लागि पनि ठूलो परीक्षाका रूपमा रहेको छ, साफ च्याम्पियनसिप २०१८ । उनको लक्ष्य नै हो, माल्दिभ्सको फुटबलमा फेरि पुराना सम्झनालायक दिन फर्काउने ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १०:२६
फेसबुक एपमै च्याट
हिमालमा नेपाली फिल्म
खप्तडको रंगीन रूप